Ahoana ny fomba hanongorana LG G2 amin'ny Android 4.4.2 ary hametraka TWRP | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Android Root, LG, Tutorials
Efa elaela aho no nanao a fampianarana feno sy be dia be momba ny fomba fampidinana ny LG G2 mankany Android 4.2.2. avy eo mba hahafahana mamaka Rooting ny terminal ary afaka mametraka ny fanovana nohavaozina izay ahafahantsika mamorona kopia nomaninay ho an'ny rafitra iray manontolo, na koa Roms novaina tselatra. Eny, io fikorontanana rehetra io dia tsy ilaina intsony vao afaka Root ny LG G2 amin'ny Android 4.4.2 ary apetaho ny Recovery voaova. Afaka mahazo izany rehetra izany isika izao amin'ny Kit Kat, Android 4.4.2, ary na dia tsy manana solosaina manokana aza, tsy marina tanteraka izany satria ny maka ny iray amin'ireo APK ilaina raha mila mampiasa solosaina manokana isika satria avy amin'ireo mpizaha tranonkala ho an'ny Android, farafaharatsiny amin'ireo nanandramako azy, tsy afaka namoaka ilay izy aho Towelrot APK izay no tsy hanamora ny Mamaka ny LG G2.
Izany rehetra izany dia ananantsika amin'ny mpamorona ny halavany GeoHot, developer ny faka ho an'ny LG G2 amin'ny Android 4.4.2 ary izay nalaza taloha Jailbreak ny iPhone na ianao no voalohany hack ny Play Station 3. Eo amin'ny sisin'ny APK izay hametraka mivantana ny fanarenana novaina TWRP, mila misaotra isika Cloudyfa, olom-pantatra taloha tamin'ny sehatra sy ny fampandrosoana Android ho an'ny LG, miaraka amin'i Roms mahatalanjona toy ny Cloudy G3, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo ROM tsara indrindra ho an'ny LG G2.
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity na ny tutorial dia mora toy ny misintona ireo APK roa izay asehoko ao amin'ilay horonan-tsary sy tantano aloha ny app GeoHot, Towelroot izay hamaka ny LG G2, fepetra ilaina amin'ny APK faharoa antsoina AutoREC ary inona no hataony ho antsika apetraho amin'ny LG G2 ny fanarenana novaina, manokana ny TWRP izay ahafahantsika mamoaka ROM efa masaka, manao kopia voafafa amin'ny rafitray iray manontolo, na manova ny fanarenana ho an'ilay tena tiantsika indrindra.
Te hiteny zavatra hafa aminao aho ato amin'ilay taratasy miaraka amin'ilay fampianarana video momba ny fomba hanongorana ny LG G2 amin'ny Android 4.4.2 ary hametraka ny fanamboarana novainaNa dia hitanao aza, tsotra dia tsotra ny mahita fa miaraka aminao ny fahitana ilay horonantsary mifamatotra dia hanana mihoatra ny ampy ianao hahatakatra ny fizotry ny fametrahana ny apk roa, ny filaharan'ny fampiharana mitovy, ary koa ny fampidinana ilaina ny superSU ary ny fanavaozana ireo mimari-droa mitovy.
Tsy isalasalana fa fahombiazana ary iray amin'ireo fomba mora indrindra hitako hahazoana Root sy Recovery amin'ny terminal Android. Izany rehetra izany dia misaotra ireo genius lehibe toa an'i GeoHot na Cloudyfa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ahoana ny fomba hanongorana LG G2 amin'ny Android 4.4.2 ary hametraka ny fanovana voaova
Jose Orlando Sarmiento dia hoy izy:
Salama Francisco. Rehefa nosokafako ny mailako dia feno hafanam-po aho satria hoy aho anakampo: "Ah, hanana ny LG G2, D806 (Arzantina) ihany aho amin'ny farany, napetraka miaraka amin'ny fanarenana nohavaozina". Efa nahavita namaka azy io aho. Saingy TSY MAINTSY TSY MISY (hatreto) ny mitady fomba hametrahana azy ao amin'ny Modified Recovery. Ny tiako holazaina dia "antsasaky ny lalana aho". Ny fitaovako dia mihazakazaka Android 4.4.2 Kit Kat, azoko tamin'ny alàlan'ny OTA, izany hoe fanavaozana ofisialy. Very ny Root teo aloha, saingy noho ny CoperFix, mpandraharaha miavaka izay nandefa rakitra roa tamina Twitter, dia nahavita namerina ny fakany aho ..., saingy TSY toa izao, ny Famerenana. Ampahatsiahiviko anao fa izaho, izay nanontany anao raha toa ny D806 (Arzantina), ary ny D802 (Internac), dia SAMY ..., ary nanapa-kevitra ny hahalala ianao. Ary ny lahatsoratra androany dia tsy nahavaha ny olana ihany koa, satria i AuroRec lehibe dia efa nandramako azy io ..., saingy TSY mifanaraka amin'ny D806 izany. Te hilaza izany aminao aho ... ary manao veloma. Miandry anao hamaha ny olan'ny LG G2 D806 aho. Famihina lehibe avy amin'ny firahalahiana amerikanina-eropeana…!
Valiny tamin'i José Orlando Sarmiento
andro tsara! Te hahafantatra aho raha miasa ho an'ny LG G2 MINI ity rooter ity?
Miarahaba, ry olona tsara tarehy avy any ANDROIDSIS. Eny, omaly alina aho vao niasa tamin'ny LG G2, D806 (Arzantina). Ary tsy maintsy milaza aminao aho fa, indray mandeha, TSY NAHOMBY aho, tamin'ny fanandramako, hametraka ny Modified Recovery, izay atoro anao eto. Rehefa nandeha nisintona ny Auto-Rec aho, ho an'ny maodely D806, dia hitako fa tsy nipoitra izany (tonga hatrany amin'ny D805, izay amidy any Brezila; any Peroa, misy ny D804). Niezaka tamin'ny D802 aho, ary TSY mandeha ..., avy eo nanao ny fitsapana tamin'ny D805 aho (satria raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia tena mitovy izy ireo), ary tsy mandeha koa izany. Ny APK dia napetraka, fa rehefa "manokatra" ianao dia TSY "manontany" anao akory, ilay malaza Avelao, ho SuperSu. MANDRESY anao ny fahazoan-dàlana, ary miseho varavarankely ERROR. Noho izany, ny fanatontoloana dia manohy amin'ny LG G2, Root aho, saingy tsy misy ny Modified Recovery. Mety ho noho io varian'ilay fitaovana LG malaza io dia mbola tsy namorona fomba hametrahana ny Recovery amin'ny Android 4.4.2 izy ireo? Eny, TSY manelingelina anao intsony aho ..., ary hiandry aho mandra-pahatongako ny tananao, ny vahaolana, raha ny tena izy dia raisiko ho zava-dehibe dia halefan'izy ireo amiko. Averiko indray, ny fankasitrahako ny asanareo ..., ary ny arahaba tsara, ho an'ny rehetra ... !!!
Salama aho manana lg g2 avy amin'ny Movistar ... Vaovao aho amin'ity ary tiako raha azo atao ny mahalala zavatra vitsivitsy ... mialoha mialoha misaotra ... Azoko atao ve ny mamaka ny lg g2 raha tsy navotsotra avy amin'ny Movistar ? ... Te-hamadika azy io ho lg g3 aho araka ny hitako fa vitanao ... misaotra
vaovao dia hoy izy:
Salama, narahiko ny fombanao hamongorana ny findaiko lg g2 mini ary niorim-paka izy io saingy rehefa nametraka ilay fanarenana novaina aho dia nomeko azy io ary maty izy ary tsy mandeha izany dia tsy mandeha ny findaiko, azafady azafady
Mamaly an'i newry
Briant dia hoy izy:
Nihodina ny findaiko aho ary tsy mandeha intsony izao !!! Ampifandraiko amin'ny charger izany fa tsy misy !! mba ampio
Mamaly an'i Briant
Jereo fa nanana olana mitovy amin'izany aho. Ny nataoko dia ny mampifandray azy amin'ny PC-ko, amin'ny maody Downloader, ary kitiho ny "Firmware Recovery", toy ny hoe nametraka diso ny fanavaozana. Navoaka tamin'ny alàlan'ny LG's PC Tool Software izy io, ary niasa tsara ny rehetra. Androany dia tsy maintsy miorim-paka ao amin'ny LG G2 D806 aho, saingy tsy aiza no ahitako fanarenana Modified, mifanaraka amin'ity karazana LG G2 ity. Raha mety aminao io dia ho afa-po aho. Miarahaba…!
Te hanampy an'i Newry aho, fa TSY manana ROM masaka napetraka, fa 4.4.2, azoko, tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ofisialy, izay fomba tokana hahafantaran'ny LG Software ilay fitaovana. Noho izany, afaka nanome anao izany vahaolana izany aho; izay TSY hitranga, raha toa ka mandeha ROM ny findainao, izay tsy ofisialy. Te-hanampy an'io fotsiny aho amin'ny hevitro teo aloha. Miarahaba…!
lamba famaohana tsy miasa amin'ny lg g2 mini D625 mety misy olona manampy ahy ho afaka faka
Mampiasà D802_autorec.apk (tandremo! Tsy ny D802T)
Mariho fa rehefa vita izany dia mijanona tsy mandeha intsony ny dondony. Saingy izao ao amin'ny rohy hoy izy ireo ny fomba fanamboarana azy
Richie gonzales dia hoy izy:
Ny fotony no nahatonga azy io ho tonga lafatra ary ny fanarenana novaina nametraka azy tsy nisy olana…. Ankehitriny rehefa mivoaka ny fanarenana aho aorian'ny fivoahana ny sary famantarana LG dia tsy manomboka na inona na inona, ary ny LED manga sy maitso dia mirehitra ... Inona no tokony hataoko amin'ity tranga ity?
Valiny tamin'i Richie Gonzales
Richie, alao antoka fa fafao ny cache amin'ny fanarenana. Raha tsy mandeha izy dia andramo fafao ny data, fa mamafa ny tahirin-kevitrao rehetra.
worldiego dia hoy izy:
Salama Joe, zavatra mitovy amiko no nitranga tamiko fa satria zava-baovao aho amin'ity ity dia tsy azoko tsara ny tianao holazaina dia nanandrana niditra tamin'ny fanarenana aho saingy tsy namela ahy hanao izany koa = (
Mamaly an'i worldiego
Toa an'i Worldiego, neophyte aho amin'ity, ary ny boot dia tsy mandeha, fa ny LED ihany no manjelanjelatra.
Ity misy horonan-tsary iray izay afaka manampy anao raha tsy afaka miditra amin'ny sitrana ianao
worldiego sy Richie. Mba hidirana amin'ny fanarenana, rehefa maty ny sela dia tazomy ny herin'ny volume + ary avelao ny herinaratra rehefa mipoitra ny sary famantarana, tazomy ny vol. Hahazo afisy famerenana amin'ny laoniny ianao, tsy raharahianao azy ary omenao azy amin'ny alàlan'ny lakilen'ny herinaratra ary ampidirinao ao ny fanarenana dia tadiavinao ireo mamafa. (Misy horonan-tsary marobe ao amin'ny youtube raha manana fisalasalana ianao).
Raha tsy afaka miverina amin'ny laoniny izy ireo dia mety nisy zavatra tsy nety nandritra ny fanarenana. Raha izany no izy dia tadiavo ny google "How to unbrick LG G2" dia misy ihany koa ny lahatsoratra maromaro hanazavany izany. (Fomba kely kokoa hanazavana azy eto)
Salama Joe. Nanaraka ny torohevitrao aho, ary tsara ny zava-drehetra. Manana ny terminal aho, miorim-paka, miaraka amin'ny TWRP napetraka ary miasa tanteraka. Ary misaotra anao tamin'ny fanehoan-kevitrao. Mijanona eo amin'ilay mifamaly aho, raha mila zavatra ianao, ary afaka manampy anao aho. Miarahaba indrindra, avy any Arzantina… !!!
Faly aho José. Ankehitriny rehefa sitrana ianao, andramo ny roman'ny caidsmooth amin'ny Android lollipop 5.0.1. Misy zavatra hatsaraina nefa mahafinaritra ny fampisehoana!
Ok Joe. Androany alina (fotoana fialam-boly ataoko), misintona ilay ROM aho, ary mizaha azy amin'ny LG-ko. Hambarako aminao avy eo. Misaotra anao Miarahaba…!
Misaotra betsaka anao Joe, taorian'ny hafatra nataoko dia nahitako niditra ny fanarenana ary nanao cache wipeie ary safidy farany nataoko dia nanao system wipeiw aho ary avy eo nitovy daholo ny zava-drehetra. Tsy azoko hoe inona no fiantraikan'ilay finday ka na ny pc aza tsy afaka nisintona ny mpamily findaiko ary tsy nekeny ho toy ny finday izany, koa tsy azoko nosokafana akory satria tsy nihetsika intsony ilay pc hitondra azy any amin'ny foibe fikarakarana avy any Telcel ary manamboatra mora foana ny rindrambaiko rehetra. Misaotra betsaka anao nikarakara ny fitarihana anay satria izay namoaka ity horonantsary ity dia tsy namaly akory na dia nangataka tolo-kevitra taminy momba ny kaonty Face aza aho. Ry namana Joe =)
Esteban Ferreyra dia hoy izy:
Salama Jose Gaga aho fa vitanao ny nametraka ny sitrana tamin'ny finday, ny fahamarinana dia narary an-doha nandritra ny volana maro, azonao omena tanana ve aho, efa mihodina ny findaiko fa tsy azoko ny auto rec ho an'ny d806 ary tsy haiko ny fomba ahafahako mametraka ny fanarenana, mety ho avy amin'ireo rakitra binary ve izany?
Valiny tamin'i Esteban Ferreyra
Miala tsiny amin'ny lesoka tamin'ny fanoratana an'i Joe. Nandeha bisy aho rehefa namaly anao. Amim-pitiavana…!
Salama re, olom-baovao aho, Emeng ary tsy mahatakatra na inona na inona momba ny faka na inona, andao jerena raha misy afaka manampy ahy. Manana kinova iraisampirenena g2 aho d802. ary tsy afaka mampihetsika 4g aho. mitadiava fampianarana izay nidirako amin'ny menus miafina ary tsy mandeha ny chip satria nandramako tamin'ny antso an-tariby hafa ireo orinasa ary tsy misy mahalala manampy ahy ,,, fanampiana
Avy aiza ianao? Misy orinasa mametraka famerana amin'ny telefaona, ohatra. Eto Arzantina dia tsy navotsotra raha tsy volana vitsivitsy lasa izay. Amin'ny tamba-jotra finday dia tokony ho safidin'ny tambajotra tianao, raha tsy mivoaka izy io dia zahao ireo fanavaozana ny sela. Raha tsy misy ny fanavaozana ary tsy miseho amin'ny tambajotra finday izany dia tsy maintsy mampirehitra rom hafa ianao.
Salama, misaotra tamin'ny famaliana. Avy any Arzantina aho, orinasa manokana. Efa nanandrana ny fanavaozana tamin'ny fitaovana esupport an'ny lg aho. ary tsy misy na inona na inona ,, eñenenu mavitrika rehefa nikitika ny safidy 4g dia tsy nipoitra taorian'ny nidirany ny menio miafina dia miseho ny safidy fa tsy afaka miditra amin'ny fizarana amin'ny 4g aho ny malemy dia kk4.4.2 ary ny kinova 80220 dia tsy maintsy ilay aziatika. Ny atahorako dia ny mikasika ny telefaona finday ary mandefasa hadisoana amiko, manana izany mandritra ny 15 andro aho, ho resaka fitaovana ve izany ary tsy hifanaraka? Ny zavatra hafahafa dia ny menio miafina manolotra ahy ny tarika 4 izay ilay avy eto. ny iray kosa 28 taona fa tsy manolotra ahy ilay iray, manantena aho hamihina anao
Ny G2 dia 4G amin'ny maodely rehetra. Movistar dia namoaka ny fanavaozana izay namoaka azy tamin'ny Janoary. Zahao ny tranokalan'ny mpiasa raha tsy milaza na inona na inona izy. Azonao antoka ve fa ao amin'ny faritra rakotra ianao?
Raha misy mini mini tutorial ao amin'ilay pejy, saingy azo antoka ho an'ny modely d806 avy any Amerika Latina, dia narahiko izany ary tsy nisy na inona na inona, raha Palermo Recoleta ilay faritra dia misy. Ary izy ireo manokana no mandefa ahy any amin'ny LG ,,, I don Tsy fantatro izay hatao fa matahotra aho handefa ahy
Kevin Morante Nima dia hoy izy:
hello xfavor xq amin'ny findaiko lg g2 mini mivoaka ny bara tambajotra nefa mandeha tsy misy serivisy izy, inona no azoko atao
Valiny tamin'i Kevin Morante Nima
hamerina tanteraka ilay tambajotra avy any Peroa aho
Rahalahy nataoko ny fametrahana ary tonga lafatra ry zareo fa avy eo namerina namaky ilay cel aho ary nandeha nizotra tamin'ny twrp ary namerina azy io ary mbola miditra ao indray, ny cellule-ko dia Lg G2 D802, izay ataoko mba hahazoako miditra amin'ny rafitra mahazatra. Ankasitrahako ny valinteninao
Santana heisenberg dia hoy izy:
Rehefa tsindrio ny bokotra ataovy ra1n dia misy hafatra miseho etsy ambany milaza hoe… ity telefaona ity dia tsy tohanana
Valiny tamin'i Santana Heisenberg
Ny sary vaovao an'ny HTC Desire Eye dia manamarina ny fakantsary eo anoloana 13 megapixel